Soo dejisan Paltalk 1.17.1.49829 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Paltalk
Paltalk – waa software si ay ula xiriiraan dadka aduunka oo idil. Kumbuyuutarku wuxuu awood u leeyahay inuu is-weydaarsado fariimaha qoraalka ah, inuu sameeyo wicitaano cod iyo fiidiyow, faylasha diraa, iwm. Paltalk wuxuu kuu oggolaanayaa inaad abuurto qolka fariinta qoraalka ama ku xiro qolalka loo abuuray qaybaha. Barnaamijkani wuxuu ka kooban yahay module kaas oo awood u leh in uu isticmaalo saacada saacadaha taageerada ah ee internetka. Sidoo kale Paltalk waxay kuu ogolaaneysaa inaad la sheekaysato asxaabta ka soo jeeda shabakada caanka ah ee bulshada Facebook.
Iskuduwaha fariimaha iyo faylasha
Awoodda si aad u sameyso wicitaano cod iyo muuqaal ah
Taageerida saacadda saacada ah ee internetka
Soo dejisan Paltalk
Faallo ku saabsan Paltalk
Paltalk Xirfadaha la xiriira